“ဒီမှာ…..ရဖို့အော်သူတွေ….မရလို့ဆော်မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » “ဒီမှာ…..ရဖို့အော်သူတွေ….မရလို့ဆော်မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် “
“ဒီမှာ…..ရဖို့အော်သူတွေ….မရလို့ဆော်မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် “
Posted by စိန္ၾကက္ဆင္ on Jun 16, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Gossip, Rumor | 15 comments
ဟလို ဟလို တက်စတီ ဝမ်းတူး သရီး……အန်းနီး ဘေါ်ဒီ ဟီးရ်
ဟုတ်ကဲ့ မူလ ကျနော့်ပို့စ် ခေါင်းစဉ်က ဒါလေးပါ” ယူကန်ဂတ် တမ်န်းကျပ်စ် ဖရီးအန်န်သစ်ဇ့် ပို့စ်” လူစိတ်ဝင်စားမှု နည်းမှာစိုးလို့ နည်းနည်းပွဲဆူအောင် ပြောင်းထားပေးပါတယ်
ဒီလိုပါ ခုတေလော ရွာထဲမှာ မမ်ဘာ အသစ်တွေနဲ့ အဟောင်းတွေကြား ငွေကြေးကွာဟမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေသမို့ …သုံးကြောင်း ရှစ်လုံးပို့စ်တွေ၊ နှစ်ကြောင်း သုံးလုံး ပို့စ်တွေ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ လူတွေ တော်တော်များများလဲ မသိတာထက် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး ၁ဝကို အပြေးအလွှားယူနေကြရပါတယ်။ အသစ်တွေကလဲ ရူးသလို ပေါသလိုနဲ့ တင်လာကြသလို အဟောင်းတွေကလဲ နဂိုရှိရင်း ပိတ်သတ်အခံနဲ့ နားလည် ပါးရိုက်တွေ လုပ်လာဂျဘာပီ။ ကောင်းပါတယ်… ကောင်းပါတယ် ဒါဟာ အပြောင်းအလဲ ဆိုတာကို လက်တွေ့ ဖော်ဆောင်နေတဲ့ သဘောပါဘဲ ကျနော်လဲ ခါတော်မှီလေး အများမိုးခါးရေ သောက်တုန်း ဝင်သောက်တဲ့ သဘောပါ ဘယ်လိုမှ မအောက့်မေ့ပါနဲ့ အဲတော့ အခု ဒါလေးကို ဖတ်ပီး ၁ဝယူလိုက်ပါလို့ဘဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ဝင်မရေးလဲ ကိုယ့်ဖာသာကို အကောင့် ၁ဝခုဖောက်ပီးသားမို့ ပွိုင့်အနှတ်မခံရအောင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ပီးသားပါ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဒီနေ့ဘဲ ကျနော် လူတယောက်နဲ့ စကားများပါတယ် သူက “မင်းတို့ကောင်တွေ ပြည်ပမှာနေ ပြည်ပရေသောက်ပီး ပြည်တွင်းကအကြောင်းတွေကို အာချောင်တယ် လေကျယ်ကြတယ် အမှန်တကယ် ပြည်တွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို မင်းတို့ကိုယ်တို်င် ဆင်းကြည့်ဖူးလား မင်းတို့ဘယ်နိူင်ငံမှာ နှစ်ဘယ်လောက် နေဖူးတယ် ဒါတွေဘဲ လူကြားကောင်းအောင်ကြွားကျတယ် ကိုယ့်မြန်မာပြည် အနှံ့တောင် ရောက်ဖူးရဲ့လား မသိဘူးတဲ့ ပုဆိန်ရိုးတွေတဲ့” နာကျင်ကြေကွဲရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဂျီးဒေါ့် အူးလေးရယ် ကျနော် မြန်မာပြည်မှာ နယ်စပ်ပေါက်တွေ အစ လှိုင်သာယာ၊သာကေတ အဆုံး လုပ်စားလို့ ကုန်သွားလို့ ဘယ်သူမှ မသွားတဲ့ တရုတ်ပြည်တွင်းကို အသားအရောင် ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ လူကုန်ကူးပီး ရောက်ခဲ့တာပါ။
နောက်တချက်က ” ကျနော် ပြည်ပ အားကိုးနေတဲ့ ပုဆိန်ရိုး မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး ” ” ပြည်တွင်းက သူခိုးတွေကို ဓားရိုးကမ်းနေသူ”တစ်ယောက်ပါ ဆိုတဲ့ အကြောင်း မှားမှန်းသိလို့ ဝန်ခံပါရစေ…….
နောက်တခုကတော့ ရွာသူ/ရွာသား အမာခံတွေ ထိုင်ခုံခါးပတ် ပတ်ထားစေလိုပါတယ် မကြာခင်မှာ အမ်ဂျီဟာ အင်တာနေရှင်နယ် အဆင့် ပုံနှိပ်သတင်းစာ အဖြစ်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ တက်ရောက်လာပါပီ ပေ၁၅၀၀ဝအထက် သာမန် ဆိုရှယ်မီဒီယာ အဆင့်ကနေ ကျော်လွန်ပီး ပျံသန်းပါတော့မယ် အဲတော့ ခုချိန်မှာ ကိုယ့်သန်ရာ သန်ရာ လိုင်းပေါ်ကနေ လက်မှတ်သေချာကိုင်ပီး အမ်ဂျီရဲ့ ပရိုခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါစီးနှင်း နိူင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်။ အမ်ဂျီဟာ သူများတွေလို အရေအတွက်ထက် အရေအချင်းဦးစားပေး စနစ်ကျင့်သုံးမှာ ဖြစ်တဲ့ကြောင့် ပရိုမိုးရှင်းထက် ထရုစ်ထ် ပရောဒက်ဘက်ကို ပိုတွန်းတင်ဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်လို ပေါက်လွတ်ပဲစား ကာစတန်မာတပိုင်း ဆားဗစ်စ်မင်း တပိုင်းကတော့ ဒစ်စကောင့်အချိန် ပရိုမိုးရှင်းအချိန်ကိုဘဲ စောင့်မျှော်ရင်း ကျန်နေခဲ့ကြမျာပါ။ ဘဝမှာ ပရိုက် အန်ဒ် ပရောက်ရှိရမယ်လို့ တက်ကျမ်း သေးသေးထဲ ဖတ်ဖူးပါတယ် ။ တခါတလေ ကိုယ်နဲ့သိပ်မဆိုင်ဘူး သိပ်အရာမရောက်ဘူးဆိုတဲ့ နေရာတွေကနေ အံဩဖွယ် လမ်းကြောင်းတွေ ပေါ်ထွက်လာတတ်ပီး တဆစ်ချိုး အောင်မြင်မှုတွေ ရတတ်ပါတယ်(အထင်) မူရင်း ဆြာပု ဆိုတော့ကာ ဒါဟာလဲ အမေလိကရဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု တစုံတရာ ဖြစ်နိူင်ကြောင်း အာချောင်ပါရစေ
ဂဗာ့ လူသားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ယာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ကော်မရှင်
ကြားတယ်။ ကြားတယ်။ စွတ်အော်မနေနဲ့။
မင်း Post ကလဲ Copy/Paste ခေါင်းစဉ် အောက်မှာ ရောက်နေတယ်။
အဲဒါဆို Point မရဘူးလားမသိဘူး။
နောက်တစ်ခါ ဆို သတိထားကွဲ့။
ပြင်ပီးပါပီ အရီးလတ် ကျနော် နည်းနည်း လောသွားလို့ပါ
နောက်ဆို အရီးတို့တွေ အလုပ်တွေ ပိုတော့မယ် ထင်ပ..
ထိုင်ခုံခါးပတ် ပတ်ထားပါဆိုတော့ လေယာဉ်စီးသူတွေကို ပြောတယ်မှတ်တယ်။
ဟုတ် တယ် ဟုတ် ?
ခွင့်သာခိုက်မှ မလိုက်ချင်ရင် ပေါ့ အန်တီမမရယ်
ကျွန်တော်တော့ လိုက်မစီးတော့ပါဘူး လေယာဉ်စီးရမှာကြောက်တယ်… ပြီးတော့ အဲ့လေယာဉ်ကြီးကလဲ လေယာဉ်စပယ်ယာမလေးတွေလဲ ပါဘူး………. ဟိဟိဟိဟ………..
မစ္စတာ လိုက်ချီးပြန်မဆပ် ရေ. တိုတိုကျောတာ တားတား တဘောပေါက်တာဒယ်…. နောက်အင်တာနေရှင်နယ်အတွေးတွေနဲ. ပို.စ်တွေ ကောမန်.တွေ တက်လာမှာပါ….နော် တိုတို နော်
ကိုယ် အလေးချိန် မပြည့်သူတွေ
အရပ်အမောင်း (နိူင်ငံတကာစံနှုန်း) မမှီသူတွေ စီးလို့မရပါဘူးကွယ်…..သိုပေမဲ့ အရင်းကြီးတွေဆိုတော့ ကြည့်ကျက်လုပ်ပေးမယ်လို့ ဆိုကြောင်း…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အင်တာနက်မှာ ရှိတဲ့ဆိုဒ်ထောင်ပေါင်းများစွာမှာ
ပွိုင့်ပေးတာ တစ်သိန်းပြည့်သွားရင် အမှန်အကန် ပိုက်ဆံထုတ်ပေးတာကလဲ
(ဒါကတော့ သူကြီးရဲ့ ကောင်းကွက်ကလေးတစ်ခ)
အဲတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတော့
အမှတ်အကြောင်းထပ်ပြောရင် မျှဝေချင်တဲ့စိတ်ထားရှိလို့ စာရေးကြတာများပါတယ်။
အဲတော့ မျှဝေပေးတော့ ပြန်ရ တာကို ကျေနပ်ပါသကွဲ့။။
ကျနော် အခုရောက်နေတဲ့နေရာရောက်အောင် 2011 ဇန်နဝါရီလဆန်းကနေ စရေးထားရပါသကွဲ့
ဘဲယိုလေး မန်းလေးကို လာခဲ့အုံး
“””ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတော့
(ပိုစ့်ပိုင်ရှင်ကို ၂ကျပ်ပေးပြီး) ပန်ပန်လည်း ကြုံတုန်းကြိတ်လိုက်ဦးမယ် အဟဲ
ပုဆိန်ရိုးရှိမှ ပုဆိန်သွား ခုတ်လို့ရဒါဂလား… ဂုံရူဒတ်စမ်းပါကွယ်…။
ဃုဏ်ရူနေဗာဒယ် ဥူးလေး အမ်ကရ် အူးဥူးကျောင်ရယ်
“အသစ်တွေကလဲ ရူးသလို ပေါသလိုနဲ့ တင်လာကြသလို ” ဆိုတဲ့ မောင်ရဲစည် ရဲ့ဒီစကားလုံးကို ကန့်ကွက်ပါတယ်၊ ဝါးလုံးရှည်ကြီးနဲ့မရမ်းပါနဲ့၊ တကယ်မသိလို့မေးတာပါ။
ဟုတ်တယ် ဒါတော့ ထောက်ခံပါတယ်..
မီးတို့ အတစ်တွေက တိတ်နားလည်တေးတာဟုတ်ဝူးးး
Myo Min Oo says:ဒီစကားလုံးကို ကန့်ကွက်ပါတယ်၊ ဝါးလုံးရှည်ကြီးနဲ့မရမ်းပါနဲ့၊ တကယ်မသိလို့မေးတာပါ။
၃။ရူးသလို ပေါသလိုလုပ်သွားခြင်း(ရှေ့မှာတော့ အတည်ကြီးနဲ့ ပြောသွားပီး နောက်ကျမှ “တကယ်မသိလို့ မေးတာပါ” ဆိုတော့ ကိုယ့်ဆြာရယ် ကျနော်လည်း မရှင်းပြတတ်တော့ဘူး
ကိုရဲစည် အသစ်ကိစ္စမရှင်းရင် နေပါ။အဟောင်း ကိစ္စတော့ရှင်းအုံးနော်။